Zimbabwe's President Robert Mugabe signed a power-sharing agreement with opposition rival Morgan Tsvangirai on Monday, relinquishing some of his powers. The deal followed weeks of tense negotiations to end a deep political crisis compo
President Robert Mugabe is expected to be declared the winner of Zimbabwe's widely condemned election on Sunday and prepare to confront his critics at an African Union summit the next day. The West stepped up calls on Saturday for action t
Pressure mounts on Mugabe to call off poll
African pressure mounted on Tuesday for President Robert Mugabe to call off a June 27 election after the UN Security Council issued an unprecedented condemnation of violence against opposition supporters. But Mugabe remained defiant and s
Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai pulled out of a run-off election against President Robert Mugabe on Sunday, saying a free and fair poll was impossible in the current climate of violence. Speaking only hours after his opposit
Zimbabwe poll heads to runoff
Opposition leader Morgan Tsvangirai will beat President Robert Mugabe in Zimbabwe's crucial election, but be forced into a runoff vote in three weeks, according to a ruling party projection. Two ZANU-PF party sources said on Tuesday the pr